UK oo u codaysay in ay ka baxaan Midowga Yurub - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldUK oo u codaysay in ay ka baxaan Midowga Yurub
June 24, 2016 Puntland Mirror World 0
London-(Puntland Mirror) Dadka boqortooyada Midowday (UK) ayaa ayaa u codeeyay in ay ka baxaan Midowga Yurub kadib afti dadweyne oo taariikhi ah oo dalkaas ka dhacday.
Gudaha dalka Ingiriiska gobolka walba oo ka baxsan caasimada London waxay u codeeyeen in laga baxo. Gobolka ugu badan oo looga codeeyay ka bixida ayaa ahaa West Midlands oo 59.11% u codeeyay ka bixida. Gudaha magaalada London 59.94% waxay u codeeyeen kasii mid ahaanshaha Midowga Yurub.
Madaxda caalamka oo ay kamidyihiin Obama, Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping, hoggaamiyaha Jarmalka, Angela Merkel, NATO iyo dowladaha barwaaqo sooranka ayaa kulli codsaday “Kasii mid ahaanshaha”, iyagoo sheegay in UK aysan xoog iyo saamayn badan yeelan doonin haddii ay ka baxdo Midowga Yurub.
Natiijada guud ee codadka wadamada ku midoobay UK ayaa ah:
[box type=”tick” style=”rounded”]51.9% waxay u codeeyeen ka bixid [/box]
[box type=”tick” style=”rounded”]48.1% waxay u codeeyeen kasii mid ahaansho.[/box]
February 18, 2017 Merkel: Islaamku maahan isha argagixisada
March 19, 2017 Shiinaha iyo Mareykanka oo ku balamay in ay si wadajir ah u wadashaqeeyaan
March 10, 2017 Madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari oo dalkiisa dib ugu noqday kadib daaweyn caafimaad oo uu ku qaatay magaalada London
July 13, 2016 Britain oo yeelatay Raysulwasaare cusub
Ciidamo booliis Soomaali ah oo tababar ugu soo xirmay Jabuuti
Kabul-(Puntland Mirror) In ka badan 30 qof ayaa la dilay kadib markii weeraryahano u labisan sida dhakhaatiirta ay weerar ku qaadeen maanta oo Arbaco ah isbitaalka milatari ee ugu weyn gudaha caasimada dalka Afhanistan ee Kabul, [...]
Raysulwasaaraha Soomaaliya oo ku dhawaaqay golihiisa wasiiradda cusub
Muqdisho-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay golihiisa wasiiradda cusub fiidnimadii Isniinta. Isaga oo ka hadlayay xarunta madaxtooyada ayna ku hareeraysanyihiin golihiisa wasiiradda cusub, Maxamed Xuseen Rooble waxa uu sheegay in golaha uu ka koobanyahay [...]
Dowladda Soomaaliya oo caalamka ka codsatay wada shaqeyn si loo joojiyo ganacsiga sharci darada ah ee dhuxusha
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dowlada federaalka Soomaaliya ayaa ka codsatay adduun weynaha, Afrika iyo Wadamada Khaliijka in laga wada shaqeeyo joojinta dhoofinta sharci darada ah ee dhuxusha Soomaaliya. Isaga oo ka hadlayay shir looga hadlayo ganacsiga sharci [...]